Italian superyacht firm exposed by EIA for breaking EU law by importing Myanmar teak floats on Hong Kong stock exchange - EIA
LONDON: The Ferretti Group, an Italian superyacht builder which boasts of using “the best quality standard of Burmese teak for teak decking”, is seeking new investment to bolster its business by going public, despite being accused of breaching EU law on the importation of what’s called ‘the king of woods’.
The group is offering 83,580,000 shares on the Hong Kong stock exchange, with dealing commencing today (31 March 2022), and hopes to raise as much as €200 million.
Ferretti Group was one of several Italian traders exposed in the report The Italian Job – How Myanmar timber is trafficked through Italy to the rest of Europe despite EU laws, published in September 2021 by the London-based Environmental Investigation Agency (EIA).
မတ်လ ၃၁၊ ၂၀၂၂
ဥရောပသမဂ္ဂဥပဒေကို ချိုးဖောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်းသစ်များကို တင်ပို့နေကြောင်း EIA အဖွဲ့က စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဇိမ်ခံသင်္ဘောထုတ်လုပ်သော အီတလီကုမ္ပဏီသည် ဟောင်ကောင် စတော့ရှယ်ယာ စျေးကွက်တွင် အစုရှယ်ယာများကို စတင်ရောင်းချနေ
လန်ဒန် – သင်္ဘောကုန်းပတ် တည်ဆောက်ရာတွင် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး မြန်မာ့ကျွန်းသစ်များကို အသုံးပြုပါကြောင်း ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားလေ့ရှိသည့် ဇိမ်ခံသင်္ဘောထုတ်လုပ်သော အီတလီကုမ္ပဏီ Ferretti Group သည် ဥရောပသမဂ္ဂဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး ကျွန်းသစ်များကို တင်ပို့လျက် ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲခံနေရသော်လည်း ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီအတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအသစ် ရှာဖွေရန်
ထိုကုမ္ပဏီသည် အစုရှယ်ယာပေါင်း ၈၅,၅၈၀,၀၀၀ ကို ဟောင်ကောင်စတော့စျေးကွက်တွင် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရောင်းချလျက်ရှိပြီး၊ ယူရိုငွေ သန်း ၂၀၀ ခန့် ရရှိရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
Ferretti Group ကုမ္ပဏီသည် လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် Environmental Investigation Agency (EIA) အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် “မြန်မာ့သစ်များ ဥရောပသမဂ္ဂ ဥပဒေကန့်သတ်ချက် ရှိနေသည့်ကြားက အီတလီမှတဆင့် ဥရောပတခွင် ပြန့်သွားခဲ့ပုံ” အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခံရသည့် အီတလီသစ်ကုန်သည်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရောင်းဝယ်မှုအဆင့်ဆင့်ကို စိစစ်အတည်မပြုနိုင်သော ကျွန်းသစ်များကို ၎င်းတို့စျေးကွက်ထဲသို့ တရားဝင် တင်ပို့ခွင့်မရှိဟု ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သစ်များကို တရားဝင်ထုတ်လုပ်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ သစ်ပင်ကို ခုတ်လှဲသည့်အချိန်မှ တင်ပို့ရောင်းချသည့်အချိန်အထိ မှတ်တမ်းများပြုစုထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
အစုရှယ်ယာဝယ်ယူလိုသူများကို ဖြန့်ဝေပေးထားသော စာမျက်နှာ ၁၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့် လမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် Ferretti ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့တည်ဆောက်မည့် ဇိမ်ခံသင်္ဘောများအတွက် အသုံးပြုမည့် ကျွန်းသစ်များကို မည်သည့်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားခြင်း မရှိပေ။ လိုအပ်သည့် ကျွန်းသစ်အများစုကို ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသာ ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရည်အသွေးမြင့် သဘာဝကျွန်းသစ်များကို အများဆုံးထုတ်လုပ်သော နိုင်ငံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ရေစိုခံနိုင်စွမ်းသတ္တိရှိသည့်အတွက် မြန်မာ့ကျွန်းသစ်ကို အလွန်တန်ဖိုးထားကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် Ferretti အနေဖြင့် မြန်မာ့ကျွန်းသစ်များကို ရရှိနိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းမည်ကို သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေ။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူမှု ဖြစ်ပွားပြီး သည့်နောက် ပြင်ပတင်ပို့မှုကို လုပ်ဆောင်သည့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း အပါအဝင် နိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် နိုင်ငံတကာမှ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်လာခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် လက်ရှိတွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိနေသည့်အတွက် မြန်မာ့သစ်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည် မြန်မာစစ်တပ်ကို တနည်းအားဖြင့် ထောက်ပံ့နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Ferretti ၏ လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ “အရဲစွန့်ရသည့်အချက်များ” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် “ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်ပြီး အမျိုးမျိုးသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် ဥပဒေများကို လိုက်နာပါကြောင်း” ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း၊ အသေးစိတ်ကို မထည့်သွင်းထားပေ။
“သင်္ဘောကုန်းပတ်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ကျွန်းသစ်တွေကို အသုံးပြုပါတယ်လို့ Ferretti ကုမ္ပဏီက ဆိုထားပေမယ့်၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့၏ သစ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သူတို့ရဲ့ လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိတာဟာ အရမ်း ထူးခြားပါတယ်” ဟု EIA အဖွဲ့၏ သစ်ဆိုင်ရာ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခေါင်းဆောင် Faith Doherty က မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
ဆက်လက်၍ Faith က “ဂျာမနီနိုင်ငံကနေ ကျွန်းသစ်တွေကို ဘယ်လိုရယူမယ်ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကျွန်းသစ်တွေကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုသတ်မှတ်ချက်တွေကို ချိုးဖောက်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာ ကျွန်းသစ်တွေကို ဘယ်လိုရယူမယ်ဆိုတာနဲ့ပက်သက်ပြီး အတိအကျ မဖော်ပြထားဘူးဆိုတော့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမယ့်သူတွေက အရဲစွန့်ရမှုတွေကို သတိပြုမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။” ဟု မှတ်ချက်ပြုပါသည်။
Ferretti Group ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဆိုဒ်တွင် “ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ တွေးခေါ်လုပ်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်တော်တို့၏ ကမ္ဘာကြီးကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ကောင်းမွေများ ချန်ထားခဲ့နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းရပါမည်” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
“Ferretti ကုမ္ပဏီရဲ့ အစုရှယ်ယာတွေကို ဝယ်ယူဖို့ စဉ်းစားနေသူများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုတာကို သိရှိဖို့လိုပါတယ်။ Ferretti ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အသုံးပြုမဲ့ ကျွန်းသစ်တွေကို ဘယ်နိုင်ငံကနေ ဝယ်ယူမည်ဆိုတာကို အတိအကျဖော်ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဇိမ်ခံသင်္ဘောတည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကျွန်းသစ်တွေဟာ သွေးစွန်းနေတဲ့ ကျွန်းသစ်တွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်” ဟု Doherty က ထပ်မံ၍ မှတ်ချက်ပြုပါသည်။